मिस नेपालको ‘रानीमहल’: दुई बर्षमा आयो टीजर, चलचित्र कहिले ? « THULOPARDA.COM
मिस नेपालको ‘रानीमहल’: दुई बर्षमा आयो टीजर, चलचित्र कहिले ?
काठमाण्डौ। दुई बर्ष पहिले तामझामका साथ शुरु भएको चलचित्र ‘रानीमहल’को छायांकन बीचमै रोकियो । टीम भित्रकै आन्तरिक विवादले छायांकन रोकिएपछि मिस नेपाल निकिता चाण्डकले पहिलो मानेको चलचित्रले हावा खायो । त्यसपछि उनले बिराज भट्टको चलचित्र ‘सांग्लो’मा अभिनय गरिन् । यहि चलचित्रलाई उनले पहिलो भनिन् । छायांकन भन्दा पनि रिलीजको हिसाबले नै पहिलो चलचित्र उनले मानेकी हुन् ।
संसारभरका प्राय: देशहरु कोरोना भाईरसको महामारीका कारण लकडाउनमा रहेको बेला ‘रानीमहल’को टीजर रिलीज भएको छ । टीजरले चलचित्र प्रदर्शनीको लागी अब तयार भएको भन्ने बुझाएको छ तर रिलीज मिति भने टुंगो छैन । लकडाउनका कारण रिलीजको लागी प्रचारसमेत गरिसकेका चलचित्रहरु पनि रिलीजको अनिश्चिततामा रहेको बेला ‘रानीमहल’को टीजर आएको हो । यतिबेला किन टीजर रिलीज गरियो भन्ने कारण भने चलचित्र यूनिटले खुलाएको छैन । यद्यपी ‘यो चलचित्र रिलीज हुन्छ है’ भन्ने जानकारी दिन टीजर रिलीज गरिएको भान हुन्छ ।
टीजर पाल्पा जिल्लामा रहेको रानीमहल वरपर घुमेको छ । चलचित्रको कथावस्तुपनि त्यहिँ वरपरको हुनेमा दुविधा छैन । स्वस्तिक फिल्मसको प्रस्तुती रहेको यो चलचित्रका निर्माता बिमल भुसाल हुन् । हिमाल न्यौपानेले निर्देशन गरेको यस चलचित्रमा निरज कँडेलको छायांकन रहेको छ भने दीपक पौडेलको पटकथा तथा संवाद रहेको छ । चलचित्रमा निकिताको साथमा पृतम राज सेंचुरी, शाहिल श्रेष्ठ, मानस्वी खरेल, नीर शाह, अर्जुन जंग शाही लगाएतको अभिनय रहेको छ ।